Translate ngokwesibini from Xhosa to French - MyMemory
Results for ngokwesibini translation from Xhosa to French
Wathi ngokwesibini, uYosefu wabuya waziwa ngabazalwana bakhe, saza isizalwane sikaYosefu saveliswa kuFaro.
Kwafika ilizwi likaYehova ngokwesibini kuHagayi, ngosuku lwamashumi omabini anesine enyangeni leyo, lisithi,
Ndinga ke ndinganikhumbuza, nangona nikwazi oku kakade, ukuba iNkosi, yakuba ibasindisile abantu emhlabeni waseYiputa, yathi ngokwesibini yabatshabalalisa abo bangakholwanga.
Badla basela ngaloo mini phambi koYehova ngovuyo olukhulu. USolomon unyana kaDavide bamenza ukumkani ngokwesibini; bamthambisa phambi koYehova ukuba abe yinganga, noTsadoki abe ngumbingeleli.
Kwafika ilizwi likaYehova kum ngokwesibini, lisithi, Yintoni na le uyibonayo? Ndathi, Ndibona imbiza ebaselweyo, ubuso bayo bubheke neno, isentla.
alemania (Spanish>Greek)undoubtedly (English>Korean)unofficially (English>Russian)beroepshiërarchie (Dutch>French)umiliatevi (Italian>Lithuanian)medis (Indonesian>English)melli (French>English)spirulina (Turkish>English)chúng ta giới thiệu lại từ đầu hả (Vietnamese>English)jos delbeke (English>Italian)buen fuego (Spanish>English)fattes (Danish>Latin)bodies (English>French)sxangxigxas (Esperanto>Russian)reading materials (English>Tagalog)zeeuwse (Dutch>German)gt ops (English>Turkish)seafarers (English>Hungarian)después, se afeita (Spanish>English)nigrum (Italian>Portuguese)clockname (English>Greek)zookeeper (English>German)i don't like being challenged (English>German)transmissionsrettighederne (Danish>Estonian)straccetti di cavallo (Italian>English)